Ferienanlage Klotz Pleystein ifulethi Gsteinach
Pleystein, Bayern, Germany
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIrene
IPleystein, yeyona ndawo ifanelekileyo yeholide yakho yasehlotyeni nasebusika phakathi kwendawo entle ejikeleze iFahrenberg kwiHlathi eliPhezulu lePalatinate kunye neZottbachtal. Yonwabela indawo enelanga ekhethekileyo kunye nezolileyo kumagumbi ethu, ngokuthe ngqo kwicala elijongene neziko lokuzonwabisa, yimizuzu eli-10 kuphela yokuhamba ukusuka kwindawo yentengiso.
Amagumbi obuqu kunye nosapho olulawulwa lusapho luziveza ngeendawo ezitofotofo ezimema ukuba uhlale kwaye wenze iholide yakho ibe ngamava ...
DTV 5 iinkwenkwezi!
Indawo yokuhlala epholileyo enesitovu esifakwe iithayile kunye "nendawo yokubeka iwayini yendalo" enewayini entle ivumela uninzi lwangokuhlwa luphele kwiqela lebhentshi yekona. Awuyi kuphoswa nantoni na ekhitshini, kusasa iziko lesidlo sakusasa kunye nomatshini wekofu, umenzi weti kunye ne-toaster ephindwe kabini iyakukhathalela oko. Isitovu seceramic esineepleyiti ezine ezineoveni / ngetroli siyakuxhasa xa ulungiselela ukutya kwakho. Xa uhlamba izitya, uya kukhululeka ngumncedisi omncinci "i-dishwasher"!
Unokonwabela ukuhlaziya okumnandi kunye neshawa kwi-walk-in shower phantsi kwepaneli, ehamba kunye nomculo, isomisi seenwele ukujonga kakuhle ... Jabulela iglasi yokugqibela yewayini ngombono weenkwenkwezi kwi-terrace! Uya kufumana ubuthongo obumnandi kwibhedi ephindwe kabini ... Eyona ndlela ingcono yokubulisa usuku oluhle kukutya kwasekuseni elangeni kwi-terrace ...!
Ibhedi enkulu eyi-1, \_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1
Ivenkile enkulu, indawo yokubhaka, ibhula / ivenkile ethengisa inyama, iindawo zokutyela ezikumgama olula wokuhamba! Inkonzo yePizza, ikhemesti kunye noogqirha kwisiza!
Iphuli yokuqubha eshushu, igalufa encinci, inkundla yentenetya "ebusweni"!
Da wir selber gerne - Reisen, Sport'ln, Motorradfahren, haben wir uns entschlossen selbst Ferienwohnungen anzubieten! Wir haben viel Erfahrung und geben diese sehr gerne an unsere Gäste weiter!
Ukufikelela kumatshini wokuhlamba / isomisi, indawo epholileyo egqunywe ngokuyinxenye!